Xiriirka Talyaaniga ee FIGC oo soo bandhigay astaan cusub! + Sawirro – Gool FM
Xiriirka Talyaaniga ee FIGC oo soo bandhigay astaan cusub! + Sawirro
(Roma) 02 Okt 2017 – Xiriirka kubadda cagta Talyaaniga ee FIGC ayaa fiidkan soo bandhigay astaanta cusub ee xiriirkaasi, iyadoo ay sidii caadada ahayd ka dhex muuqdaan afarta xiddigood ee muujinaya guusha Talyaaniga ee Koobka Adduunka.
Xulka Nazionale ayaa sida la ogyahay 4 jeer hantay Koobka Adduunka kuwaasoo kala ah 1934, 1938, 1982 iyo 2006, sidaa daraadeed waxay 2-aad uga jiraan adduunka iyadoo ay kaliya ka horreeyaan Brazil oo 5 jeer hanatay.
Xiddigaha afarta ayaa loogada dhakada looga shaqlay, sidoo kale ‘Italia’ ayaa loogada la dhex geliyay markii ugu horreeysey tan iyo sanaddii 1952-kii, iyadoo markii ugu dambaysey ee astaantan la bedelo ay ahayd 2007-dii, waxaana astaanta caadiyan qaata xulka Talyaaniga ee Azzurri.
“Astaantan cusub ee FIGC waxay dhamaystiraysaa casriyayn iyo cusboonaysiin aan wadney 3-dii sanadood ee ugu dambeeyay,” ayuu yiri guddoonka FIGC jaalle Carlo Tavecchio.
Talyaaniga ayaa markii ugu horreeysey qaatay inuu dhar buluug ah ku ciyaaro sanaddii 1911-kii, tiiyoo ay jirto inuusan midab buluug ihi aanu calankooda meelna uga jirin.
— Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) 2 oktober 2017
Man United oo ku dhididsan qaabkii ay u xafidan lahayd Marouane Fellaini!!
Xiddigaha Bayern oo tababbaro uusan ka warqabin Ancelotti isugu imaan jiray